GRILLED WHEAT CAKES WITH OCTOPUS (TAKOYAKI) 45'S 1.35KG
ကာဗွန်နိတ်အချိုရည် | ကော်ဖီ | အားဖြည့် အချိုရည် | အားကစားအတွက် အချိုရည် | လက်ဖက်ရည်
ပြည်ပသွင်း အာလူးကြော် | ပြည်ပသွင်းပင်လယ်စာမုန့် | ရေညှိမုန့် | ပြည်ပသွင်းဆန်မုန့်ကြွပ် | ပြောင်းဖူးကြော်မုန့် | မုန့်ကြွပ် | တခြားမုန့်
ပဲများ | မြေပဲ | သီဟိုဠ်စေ့ | အခွံမာသီးနှင့်အစေ့ | နေကြာစေ့ | အခြား‌အစေ့များ
ဒိန်ချဥ် | ချိစ် | ထောပတ် | ခရင်(မ်) | ကြက်ဥ ဘဲဥ ငုံးဥ | နွားနို့
အေးခဲထားသောအာလူးချောင်းကြော်နှင့်အာလူး | အေးခဲထားသောခေါက်ဆွဲ | အေးခဲပြုပြင်ထားသောပင်လယ်စာ | အေးခဲပြုပြင်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက် | အေးခဲထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက် | အေးခဲထားသောမုန့်သား | အေးခဲထားသောအသီးနှင့်အနှစ်များ | အသင့်စားမုန့် | အေးခဲပြုပြင်ထားသောအသား
ဝက်သား | အမဲသား | ဆိတ်သား | ကြက်သား | ဘဲသား
ပန်းသီးနှင့်အရည်ရွှမ်းသီးများ | ငှက်ပျောသီး | သံပရာမျိုးဝင်အသီး | ဖရဲသီး | အသီးမာများ | ရာသီစာအသီး | တခြားသစ်သီးများ
ရောစပ်ပြီး ကောက်တေး | အခြားအရက်များ | အရက်
ရေချိုးခန်းသုံးတစ်ရှူး | မျက်နှာသုံးတစ်ရှူး | ရေစိုတစ်ရှူးနှင့်မျက်နှာသုတ်ပဝါ
တခါသုံးအပိုပစ္စည်းများ | တခါသုံးအိတ်များ | တခါသုံးပန်းကန်ခွက်ယောက်များ | အစားစာထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ
Home > Chilled & Frozen Food > Frozen Product > Frozen Processed Seafood > GRILLED WHEAT CAKES WITH OCTOPUS (TAKOYAKI) 45'S 1.35KG
ကုန်ပစ္စည်း ကုဒ်: #141906110011
ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်: J-BASKET
ထုတ်လုပ်ရာ နိုင်ငံ: CHINA
It isaball-shaped Japanese snack or appetizer made ofawheat flour-based batter and cooked inaspecial molded pan. It is typically filled with minced or diced octopus, tempura scraps, pickled ginger, and green onion.
ZUKUYAMA HOKKAIDO SCALLOP MEAT 1KG
PFP CRAB STICK 480G
DO DO CRAB STICK 250G
SEASONED OCTOPUS WASABI FLAVOR (TAKO WASABI)1KG
SEASONED FLYING FISH ROE (TOBIKO)500G
PREMIUM FOOD SEASONED CAPELIN MASAGO ROE ORANGE (EBKO) 500G
SHRIMP BALL 500 G
SQUID BALL 500G
09 778 496 480 09 778 400 062 (တနင်္လာနေ့ မှ စနေနေ့ထိ - မနက် ၉နာရီမှည၇နာရီအတွင်း)
09 778 496 480
Showroom သို့ ဆက်သွယ်ရန်
09 778 400 774 ဆက်သွယ်ရန် မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်း